Samsung S10 bilbila jallatamaaf filatama tahee – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Samsung S10 bilbila jallatamaaf filatama tahee
Gulaallii Meshaa/Gulaallii Moosaajii
Dhabbati Samsung maal jedhe
Dhamatiin kalaqi mobayilaa waggaa 10 taasifne har’a bilbila ismaart foonii S10E,S10,S10+ akka qabanee dhihaannu nu taasiseera. Amma gammachuudhaanis gabaaf qabanee dhihaanneerra jedhaniiruu.
Iskirinii bilbila S10
AMOLED jechuun (Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) jechuudha, Kunis gosa OLED technology tahee kan baayinan ismart fooni keessatti dhimmi itti baahama jiruudha.
Gosti teekinoolojii (Super-Amoled) jedhamuu immoo gosa teekinoloojii (touch and screen) bakka tokkotti qabu jechuudha.
Super Amoled bilbilli of kessa qabu qulqullinaa haalluuf rezolushinii guddaa qaba.
Fayyadammaf gammachuu maamilaa irratti kan xiyyefatu dhaabbatti Samsung , vidiyoo yommu ilaallu wantoota ija keenya hatan hambiseera, kana teekinoolojii (Presice laser cutting) jedhamuu fayyadamaniruu.
Biraand manajeeriin bilbila (Paul Guzek)Samsung akkas jedhee dubateera,”Iskiriinii bilibila Samsung nuti tolchinuun kan gitu hin jiru” dorgomuf yaalunis akkasumaanii, dhabati (Apple)lifillee nutu iskiriini omisha jedhera.
Dudduba bilbila kana ture gara fuldura iskiriinii bilbila kanatti dabarsaniru, Kanas teekinoolojii ultiraa soonik seensorii iskiriinii kessatti dabalaniiruu, kunis kan ijaan mul’atu miti.
Galaxy S10e – 5.8”
Galaxy S10 – 6.1”
Galaxy S10+ -6.4
Haalluuf bocii isaa kan argamuu dandahuu gosa netiwoorkiif halluu biyya kessa jirtan kessatti kan eyyemamu irratti hundaa’eetuu jedhaniiru.
Kaameraan Samsung S10 namoota dandeetti suraa kaasuu hin qabneefillee bilbila gaaridha kaameraan bilbila kana waan baayye ofii isaa mijessuun suraafii vidiyoo haalluu ajai’ibsisaa qabu waraaba jechuudha.
Walumaa galatti leensii dudubbaa sadiif leensii fulduraa lama qaba jechuudha.
Leensii kaameraa DSLR osoo isin hin barbachisin ,suuraa zoom gochuu dandeessu,Wide-Angle fi ultra wide suuraa panaromikii landi iskeepii tahee kaasuuf isin dandeesisa
Kaameraan shan modeela S10+ kessatti qofa argama ,S10 kameraa dudubaa sadiif kameeraa fulduraa tokko qofan gabaara oole.
Suuraa dukana kessa ykn halkan kaasuufille bilbilli S10 hin yada’inaa jedha,piroosesoorii cimaa waan qabuuf osoo isin (shutter) hin tuqin fireemi ifa walfakkaata qabu lama walitti fiduun gara suuraa bareedaatti geddara.Kunis appercharii F1.5 fi F2.4 waan qabuufi
Dandeetti sur-sagalee 4K warabuulee qaba jechuudha.
Kaameran fuldura(Selfie) jedhamuun bekamuu suura (artistic) tahan dandeetti kaasullee qaba.
Bilbilli S10 (advanced and intelligent hardware fayyadamuun engineered) waan taheef akkaataa fayyadama kessanii baruun (apilikeeshiinii) isin fayyadamtan yeroo isin banuuf jettan dursee mijeessuun akka isin bilbila kana wajjin hariroo cimaa qabaattan godha.
Bilbilli S10 sarara shiboo charjarii malee teekinolojii wireless fayyadamuun humna kuufachuu dandaaha,humna dabarsuus dandaahaa, teekinoolojiin charjii wayeerleesii 2.0 bilbila kessan saffisaan gara 100% dafee isiiniif guuta.
Waa’eee kessoo tekinoolojii bilbila kana kutaa 2ffaan itti deebina